C/qaadir Siidii oo sheegay hawlgal laga sameeyay Shabeellaha Hoose in lagu dilay Amiiro Shabaab ah |
C/qaadir Siidii oo sheegay hawlgal laga sameeyay Shabeellaha Hoose in lagu dilay Amiiro Shabaab ah
Gudoomiyaha Maamulka Gobolka Shabeellaha Hoose C/qaadir Maxamed Nuur (Siidii), ayaa ka waramay hawlgal ay iska kaashadeen Ciidamada Dowladda iyo Amisom, oo laga fuliyay Gobolka Shabeellaha Hoose.
Gudoomiyaha wuxuu sheegay Ciidamada oo hal habeen ka hor ka dhaqaaqay Degmada Qoryooley, in ay u kala dhaqaaqeen 3 wado, ayna ku dileen sida uu hadalka u dhigay 31 xubnood, oo Shabaabka ka tirsan.
C/qaadir Maxamed Nuur waxa uu xusay in hawlgalku ka kala fulay wadada xiriirisa Qoryooley iyo Buulo Mareer, Qoryooley & Diinsoor iyo wadada ka baxda Qoryooley ee tagta Xero Labaad, oo ku taala dhinaca galbeed ee Qoryooley.
C/qaadir Siidii, ayaa sheegay in laba mar Ciidamada Dowladda iyo Amisom, ay iska horimaad toos ah la galeen Shabaabka, wuxuuna ku kala sheegay 4-tii aroornimo ee Isniintii shalay iyo barqanimadii isla shalay, oo markale ay isku noqdeen labada dhinac.
Gudoomiyaha oo kala qaad qaaday sida uu hawlgalka u fulay, ayaa wuxuu tilmaamay wadada ka baxda Qoryooley ee Diinsoor tagta, in ay ku dileen Amiirkii ugu sareeyay Ururka Al Shabaab ee dhanka Qoryooley, inkastoo uusan magaciisa sheegin.
Qoryooley iyo inta u dhaxeyso Xero Labaad, ayaa waxa uu sheegay inay ku dileen 3 kale oo Amiirada Al Shabaab ah iyo tiro kale oo ka tirsan dagaal-yahananadooda, isla-markaana ay xilligaan Ciidamada Dowladdu ku sugan yihiin Xero Labaad.
Wadada xiriirisa Qoryooley iyo Buulo Mareer, ayuu iyana sheegay inay ku dileen dagaal-yahano badan oo ka tirsan Ururka Al Shabaab, markii ay hawlgal qorsheysan ku ekeeyeen, isla-markaana ragga ay dileen, ayuu afar ka mid ah ku sheegay Amiiro, halka 27-ka kalana uu ku sheegay Ciidamada Shabaabka.
C/qaadir Siidii oo la hadlay Idaacada Goobjoog ee Magaalada Muqdisho, ayaa qeexay in hawlgalkaan uu ahaa, mid Degmada Qoryooley looga fogeynaayay dagaal-yahanada Shabaabka, si meesha looga saaro weerarada ay ku soo qaadayaan.
Taliska Amisom iyo Ururka Al Shabaab, ayaan weli ka hadlin hawlgalada uu C/qaadir Siidii sheegay, in Shabaabka jab ugu geysteen, kagana fogeeyeen Degmada Qoryooley. buy Suhagra, acquire lioresal.